Digniin deg deg ah oo uu diray Xoghayaha Guud ee Sharafta leh ee UNWTO Francesco Frangialli
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Digniin deg deg ah oo uu diray Xoghayaha Guud ee Sharafta leh ee UNWTO Francesco Frangialli
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Xoghayihii hore ee UNWTO Francesco Frangialli iyo Dr. Taleb Rifai labaduba way ku filan yihiin.
Warqaddii qalinka ahayd ee u dambaysay ee uu qoray Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay waxa ay ka hadlaysaa qishka, Maxkamad Stalinist ah iyo qodob ay xataa caddaalad-darro noqoto.
Francesco Frangialli, oo ah Xoghayaha Guud ee Sharafta leh ee UNWTO waxaana ka jawaabay madaxii hore ee ururka Warqadda Zurab Pololikashvili ee ku socota dhammaan Dawladaha xubnaha ka ah toddobaadkii hore.
Francesco Frangialli waxa uu ahaa Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2009 waxana lagu tiriyaa mid ka mid ah dadka sida aadka ah loogu ixtiraamo socdaalka iyo dalxiiska adduunka.
Guulihii ugu waaweynaa ee Frangialli uu gaaray intii uu ahaa xoghayaha guud waxaa ka mid ahaa “abuurista nidaam caalami ah oo la aqbalay si loo cabbiro saameynta dalxiiska ee dhaqaalaha qaranka iyo qaadashada Xeerka Anshaxa Caalamiga ah ee Dalxiiska si loo dhiirigaliyo dalxiis mas’uul ah oo waara.
Ku xad-gudbida xeer-nidaamiyahan ayaa ah qodobka kicinaya in madaxii hore ee UNWTO uu si adag uga hadlo waraaqo cad-cad oo ka dhan ah hoggaamiyaha hadda ee ururka.
Mr. Francesco Frangialli wuxuu u sheegay Zurab Pololikashvili jawaabtiisa warqad furan:
Wakiilada qaaliga ah ee Dawladaha xubnaha ka ah Ururka Dalxiiska Adduunka,
Warqad Furan oo Koowaad: WTN ee Hufnaanta Doorashada UNWTO
Warqad furan oo labaad oo ku socota Qaramada Midoobay UNWTO oo ku saabsan warbixinta uu soo saaray Sarkaalka Anshaxa ee dhaqanka maamulka iyo ku dhaqanka Ururka.
Waxaan qoraal kuugu soo qorayaa xilka aan hayo ee Xoghayihii hore ee Ururka Dalxiiska Adduunka. Kuwa aan aqoon u lahayn waayihii hore, waxaan ahaa ku xigeenka xoghayaha guud ee 1990 ilaa 1996, Xoghaye Guud. adigaa ku-meel-gaarka ah 1996-1997, iyo Xoghayihii Guud ee 1998-kii ilaa 2009. Muddadii 2001-2003, waxaan horseedey in Hay’addeenna loo beddelo hay’ad gaar ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay.
Anigoo masuul ka ah Xoghaynta waxay soo rogtay, aragtidayda, xoogaa is-xakameyn ah, gaar ahaan xilliga uu Ururku ku hawlan yahay hannaan doorasho oo uu ku magacaabayo Xoghayaha Guud ee afarta sano ee soo socda. Taasi waa sababta, iyadoo xaqiiqda ah in aan la wadaago inta badan fikradaha qoraalkan, haddana ma saxiixin warqadda furan ee koox saraakiil sare ah oo rasmi ah ay kuu soo direen.
Laakin warqaddii dhawaan la faafiyay ee loogu jawaabayay Xubnaha Xoghayaha Guud ee xilka haya iyo eedaymaha khaldan ee ay xambaarsan tahay ayaa igu qasbaysa in aan si cad uga jawaabo laba qodob.
Ugu horrayn, haddii ay timaaddo muddadii aan xilka hayay, ma aqbali karo hadalkaas "wax isdabamarin ayaa la sameeyay, dowlado badan oo muhiim ah oo xubin ka ah ayaa ka baxay, xaalad uu Ururku isku deyayay inuu wax ka qabto ilaa wakhtigaas."
Markaad tixraacayso "wax isdabamarin", Qofna ma joogi karo mugdi. Wax kasta oo sharci darro ah waa in la ogaadaa. Waa in la sheegaa goorta ay dhacdey, yaa ka masuula, iyo dalkee ka tegey natiijadii.
Runtii waa waxa loo yaqaan tijaabada Stalinist
Markii aan ahaa Xoghayaha Guud, ma jiro waddan muhiim ah oo ka baxay Ururka.
Markii aan ku biiray WTO aniga oo ah ku xigeenka Xoghayaha Guud ee da'da yar ee Antonio Enriquez Savignac, Ururku gabi ahaanba wuu khalkhal galay. Wadamo badan oo ku yaala Bartamaha Ameerika, sida Costa Rica iyo Honduras, iyo Asia-Pacific, sida Filibiin, Thailand, Malaysia, iyo Australia, ayaa ka baxay; Maraykanku waxay ahayd inuu si degdeg ah u raaco. Aniga iyo kii iga horreeyay, iyo, ka dib, aniga oo naftayda amar ku siiyay, waxaan ku guuleysannay inaan beddelno isbeddelkaas.
Markii aan ka tagay UNWTO 2009, Hay'addu waxay lahayd 150 xubnood. Dhammaan dalalkii Aasiya ee hore uga baxay ayaa dib ugu soo biiray, waxaana yimid qaar cusub oo ka tirsan qaybtan adduunka oo muhiim u ah warshadaha dalxiiska. Wadamo muhiim ah sida Saudi Arabia, Croatia, Serbia, Ukraine, Kazakhstan, South-Africa, iyo kuwo kale oo badan, ayaa ku biiray. Latvia, Lithuania, Boqortooyada Ingiriiska, Norway, Australia, iyo Kanada ayaa xubno ka ahaa.
Waxa aan helay warqad ay dawladda New Zealand ku muujinayso rabitaankeeda ku biirista. Xoghayaha Ganacsiga ee Maraykanka ayaa kula taliyay isla tallaabadaas Madaxweynihiisa. Akhrinta warqadda Xoghayaha Guud, waxaan ku faraxsanahay inaan ogaado in maamulka hadda jira uu ka shaqeynayo "wax ka qabashada" maqnaanshaha wadamada waaweyn qaarkood. Waxaan xusayaa in afar sano ay xilka haysay, wax natiijo ahna aanay jirin.
Waad ku mahadsan tahay tabarucaadka ka imaanaya wadamadan "qanika ah", laakiin sidoo kale si taxadar leh loo maamulo dib u habeyn, iyo xaddidaad adag oo ku saabsan kharashaadka shaqaalaha, taas oo lumisay aragga, UNWTO waxay ku raaxaysatay markii aan ka tagay, dhaqaale badan oo la taaban karo, oo oggolaanaya in la maalgeliyo barnaamij qani ah oo kala duwan oo waxqabadyo ah ee muddada miisaaniyada soo socota 2010-2011. Hadii a"dhaqaale xumo daran” waa jiray ama jiray maanta, laga soo bilaabo muddadaas ma jirto.
Midda labaad, anigu kuma raaci karo male, maadaama oo goluhu ansixiyay, habraaca magacaabista musharraxa jagada Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay lagu go’aamiyay, loona hirgeliyay hab saxan, hufnaan iyo hab dimoqraadi ah. Wax la mid ah ma ahayn.
Aniga iyo ku-xigeenki xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Dr. Taleb Rifai, oo aan sinaba u faragelinin doorashada la dooranayo, waxaan ka dignay waqtigeeda halista khatarta ku jirta jadwalka uu soo jeediyay musharaxa Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo uu aqbalay Golaha fulinta ee kalfadhiga 112aad ee Tbilisi. Haddii codkeenna la maqli lahaa, shakiga hadda saameeya sharci ahaanshiyaha geeddi-socod doorasho ma jiri lahayn.
Kullankii ka dhacay waddankii uu mas'uulka ka ahaa xilligan oo xubno badan oo Golaha ka tirsan ay awoodi waayeen inay safraan cudurka faafa iyo markii qaar badan oo iyaga ka mid ah ay wakiil ka ahaayeen safaaradahooda Georgia, ayaa si cad u soo bandhigay eex.
Goluhu waxa uu ansixiyay jadwal aan suurtogal ahayn in musharrixiintu ay is-dhawaaqaan, si ay taageero uga helaan dawladahooda, si ay u faahfaahiyaan una faafiyaan barnaamijkooda, una ololeeyaan si caadi ah. Caqabaddan gabi ahaanba aan sabab lahayn, oo ay weheliso xaaladaha nadaafadda ee jira iyo muddada dhamaadka sanadka, ayaa ka hor istaagtay musharrixiinta suurtagalka ah in ay booqashooyin ku tagaan wadamada codbixinta. In doorashada lagu qabto Madrid waxay sidoo kale u xaglinaysay Xoghayaha Guud ee xilka ka degaya, isagoo ahaa safiirkii hore ee Spain. Waxaas oo dhami waxay siiyeen mas'uulka xilka haya faa'iido tartan oo aan caddaalad ahayn oo ka sarreysa tartamayaasha suurtagalka ah.
Mar-mar-ku-sheegga muddada gaaban ee qosolka-yar ee u dhexeeya labada kal-fadhi ee Goluhu wuxuu ahaa in uu yeesho kal-fadhiga 113-aad ee Madrid oo ay weheliso bandhigga dalxiiska ee muhiimka ah ee Spain, FITUR. Tani waxay si fudud u qarinaysay runta xubnaha, maadaama ay caddaatay bilowgiiba in, masiibada dartiis, FITUR aysan u dhici doonin sidii la qorsheeyay Janaayo. Sida ku cad warqadda aan ku saxeexay Taleb Rifai, deegaanka adag ee nadaafadda waxay ahayd inay horseeddo xalka lidka ku ah: in kalfadhiga golaha la qabto sida ugu macquulsan, xilliga gu'ga sida caadiga ah, ama xitaa bilowga Golaha Guud.
Xaaladahan oo kale, horumarinta taariikhda waxay ahayd kaliya khiyaano.
Xoghayaha Guud ee xilka ka degaya waxa uu warqadiisa ku dooday in habraaca loo maray uu ahaa mid sharci ah, isla markaana uu dhacayo “iyada oo ay hoos imanayso Golaha Fulinta laftiisa".
Tani waa sax. Laakiin sharcinimadu kuma filna. Marka aad habka wax u marinayso, waxa aad noqon kartaa sharci iyo anshax xumo labadaba.
Habka doorashadu waxa uu noqon karaa mid si rasmi ah waafaqsan Xeerarka, laakiin isla mar ahaantaana aan caddaalad ahayn oo aan sinnayn. Dhammaadka maalinta, ma aha anshax.
Sida Sophocles u qoray:
"Waxaa jirta meel ka baxsan oo xitaa caddaaladdu ay caddaalad darro noqoto".
Waxaan rajeynayaa in Golaha Guud, awooddiisa "xubin sareUNWTO, waxay sameyn doontaa waxa lagama maarmaanka u ah si loo xaqiijiyo doorasho cadaalad ah oo ka dhacda Madrid iyo soo celinta maamulka wanaagsan ee Ururka.
Waxaan idiin rajeynayaa dhammaantiin joogitaanka wanaagsan ee Spain.
Nofeembar 22nd, 2021
Xoghayaha Guud ee Sharafta leh ee UNWTO